Isiseko sokutshaja i-AirPower sasineeprototypes kwaye le yenye yazo | Ndisuka mac
Isiseko sokutshaja i-AirPower sasineeprototypes kwaye le yenye yazo
Ingabonakala ngathi emva kwexesha elide Isiseko sokutshaja somoya Ukuba iApple yazisa intetho ephambili kodwa ukuba ayizukuthengisa ayizukuphinda ithengiswe, kodwa akukho ... Umboniso wesiseko sokutshaja ngoku uvela kwinethiwekhi kwiminyaka emine emva kokuba inkampani yaseCupertino ivumile ukuba ayizukuthengisa emva uhambo olude lokuqikelela, amarhe kunye nabanye.
Kuyacaca ukuba iprototype ngoku yesiseko sokutshaja ayisayi kusibonisa nantoni na esingayibonanga ngaphambili, kodwa Ngokuqinisekileyo iyakumangalisa uyilo olunzima olunalo kwaye ngaphezulu kwayo yonke into ngenxa yento eyayibonisa ngelo xesha. UGiulio Zompetti, Umqokeleli wezixhobo zeApple, unethuba lokufumana le prototype kwaye wasibonisa yona kumnatha wonxibelelwano.
Le prototype isebenza ngokupheleleyo
Into elungileyo malunga noku kukuba sinokuthi iyasebenza. Kwaye kufanelekile ukufikelela kwiimvavanyo zokugqibela kunye nokunikezelwa kwemveliso elandelayo, I-Apple iqhube iimvavanyo ezihambelanayo nezi prototypes kwaye le yenye yazo iyasebenza.
AirPower @PastortheDJ @SABCiindaba
-Giulio Zompetti (@ 1nsane_dev) Agasti 5, 2021
Eyona nto ibalaseleyo kuko konke oku kukuba ngoku kubonakala ngathi iApple izakusebenza kwisiseko esitsha sokutshaja esifana ne-AirPower njengoko babesenza embindini Bloomberg kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Akucaci kuthi ukuba iApple ifuna ukuqhubeka nolu hlobo lweprojekthi, nangona kuyinyani ukuba iMagSafe ivule indlela yolu hlobo lomthwalo kwaye kunokucingelwa ukuba iya kuba yiprojekthi efana ne-AirPower engazange ithengisiwe. Ngayiphi na imeko, njengesiqhelo, siya kumamela yonke into abasibonisa yona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Isiseko sokutshaja i-AirPower sasineeprototypes kwaye le yenye yazo
Le intsha kunye neqondayo i-Ikea Starvkind smart air purifier
Ngoku ungathenga i-cryptocurrencies kumakhadi akho esiqhelo e-Apple Pay ngenxa yeCoinbase